Somaliland: Maalgashiga Dhexmaray Somaliland Iyo Imaraadka Ee Balaadhinta Marsadeena Berbera, Waa Midkii Faqriga Ay Kaga Bixi La Hayeen Bulshadeenu: - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maalgashiga Dhexmaray Somaliland Iyo Imaraadka Ee Balaadhinta Marsadeena Berbera, Waa...
Somaliland: Maalgashiga Dhexmaray Somaliland Iyo Imaraadka Ee Balaadhinta Marsadeena Berbera, Waa Midkii Faqriga Ay Kaga Bixi La Hayeen Bulshadeenu:
Mashruuca Malagashiga ee dhexmaray Jamhuuriyadda Somaliland iyo Dalka Imaraadka oo noqonaya kii ugu weynaa ee Somaliland nasiib u yeelato inay Magaceeda kula gasho waddan kamid ah dalalka Qaniga ah, waxa lays waydiin karta Somaliland ma ka faa’idaysan doonta Malgashigaas oo ah midkii ay kaga baxaysay Faqriga ragaadiyay bulshadeena. Tan iyo intii illahay ummadeena ku abuuray arlada iyo ciida Somaliland, waxaynu ahayn dad ka aradan khayraadka rabbi inagu manaystay. Haddaba Mashruucan oo dad dano gaar ah lihi laga yaabo inay kala hortagaan carqaladayn iyo buuq aan aqoon ku dhisnayn, waxaynu isku dayi doona inaynu sharaxaad kooban ka bixino, waxyaabaha faa’iidooyinka leh ee ku dugaan Maalgashigan Dalka Imaraadka iyo Somaliland dhexmaray.
Mashruucan oo ay fulinayso Shirkadda DP World waxa cad ahmiyadda, waxtarka iyo faaiidada uu mashruucani u leeyahay Jamhuuriyadda Somaliland, isagoo u leh dalka Somaliland fursado dhaqaale iyo mid siyaasadeedba, sidoo kale wuxuu dhiirrigelin iyo horseedba u noqonaaya maalgashadayaal badan oo caalami ah taasina waxay waxbadan ka taridoontaa shaqo abuurka dhalinyarada iyo dhaqaalaha Somalialnd guud ahaan.
Mahruucan oo shirkadda maamulaysa ay iska kaashanayaan labada dhinac ee dawladda Somaliland iyo dawladda UAE oo ay wakiil ka tahay shirkadda DP World. Wuxuu noqonayaa mid laga helo shaqalayn badan iyadoo ay dad badani ka faa’idaysan doonaan, sidoo kale shaqaalaha hadda jooga dekedda Berbera waxay ahaan doonaan shaqaale sidooda u shaqeeya oo aanu haba yaraatee mashruucan casriyaynta dekeddu shaqaale cusub oo lagu kordhiyo mooyaane sababi doonin wax shaqo dhimis ah. Mashruucan marka lays dultaago qaybaha uu ka koobanyahay waxa la milicsan kara faa’iidada la yaabka leh ee ugu duugan shacbiga iyo ummadda Somaliland, waxaynuna ka soo qaadan karnaa dayactirka, qalabaynta iyo ballaadhinta dekedda iyo dhismaha Free Zone-ka oo kaliya aan ku koobnayn balse ay qayb ka yihiin dhismaha jidka Berbera-Wajaale iyo mashaariic ay ka midyihiin horumarinta beeraha iyo tamarta oo ku lammaan, taas oo ka dhigaysa marsadeena Berbera mid waraabisa caalamka oo dhan iyo Afrikaba, dhinaca kalena la tartanta Dekedaha kale ee Gobolka ku yaala. Geesta kale, haddii mashruucani hirgalo wuxuu xoojin doona Xidhiidhka iyo galaan galka ay ganacsatadeena Somaliland u yeelan doonaan dhinaca u safrida iyo xidhiidhka dalka Imaraadka, iyadoo ay u fududaan doonto ganacsatada Somaliland fiisaha dalku galka Emarate-ku. Mashruucan Maalgashiga Dekeda Berbera uma qalmo mana gayo in loogu qayliyo hab beeleed, ama la siyaasadeeyo, wuxuuna mudanyahay inay shacbiga Somaliland meel uga soo wadajeestaan sidii ay isu barbar taagi lahaayeen hirgalinta mashruucan oo dabar gooyn doona faqri badan oo daboolay da’yarteena.
Maalgashiga Dhexmaray Somaliland Iyo Imaraadku Waa Midkii Faqriga Ay Kaga Baxayeen Bulshadeenu:
Mashruucan oo ay fulinayso Shirkadda DP World waxa cad ahmiyadda, waxtarka iyo faaiidada uu mashruucani u leeyahay Jamhuuriyadda Somaliland, isagoo u leh dalka Somaliland fursad dhaqaale iyo mid siyaasadeedba, sidoo kale wuxuu dhiirrigelin iyo horseedba u noqonaaya maalgashadayaal badan oo caalami ah taasina ay waxbadan ka tarayso shaqo abuurka dhalinyarada iyo dhaqaalaha Somalialnd guud ahaan.
Mahruucan oo shirkadda maamulaysa ay iska kaashanayaan labada dhinac ee dawladda Somaliland iyo dawladda UAE oo ay wakiil ka tahay shirkadda DP World. Wuxuu noqonayaa mid laga helo shaqalayn badan iyadoo ay dad badani ka faa’idaysan doonaan, sidoo kale shaqaalaha hadda jooga dekedda Berbera waxay ahaan doonaan shaqaale sidooda u shaqeeya oo aanu haba yaraatee mashruuca casriyaynta dekeddu shaqaale cusub oo lagu kordhiyo mooyaane sababi doonin wax shaqo dhimis ah. Mashruucan marka lays dultaago qaybaha uu ka koobanyahay waxa la milicsan kara faa’iidada la yaabka leh ee ugu duugan shacbiga iyo ummadda Somaliland, waxaynuna ka soo qaadan karnaa dayactirka, qalabaynta iyo ballaadhinta dekedda iyo dhismaha Free Zone-ka oo kaliya aan ku koobnayn balse ay qayb ka yihiin dhismaha jidka Berbera-Wajaale iyo mashaariic ay ka midyihiin horumarinta beeraha iyo tamarta oo ku lammaan. Sidoo kale, Haddii mashruucani hirgalo wuxuu xoojin doona Xidhiidhka iyo galaan galka ay ganacsatadeena Somaliland u yeelan doonaan dhinaca safrida iyo xidhiidhka dalka Imaraadka, iyadoo ay u fududaan doonto ganacsatada Somaliland fiisaha dalku galka Emarate-ka. Mashruucan Maalgashiga Dekeda Berbera uma qalmo mana gayo in loogu qayliyo hab beeleed, ama la siyaasadeeyo, wuxuuna mudanyahay inay shacbiga Somaliland meel uga soo wadajeestaan sidii ay isu barbar taagi lahaayeen hirgalinta mashruucan oo dabar gooyn doona faqri badan oo daboolay da’yarteena.
Somalia: PM, security chiefs grilled in parliament over security failures